एनआरएनए निर्वाचन : किन अल्झियो मतदान ? – Khabar Silo
काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नयाँ नेतृत्वका लागि बुधबार ५ बजे हुने भनिएको मतदान अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। मतदाता लाइनमा उभिए पनि बेलुका सवा ६ बजेसम्म पनि मतदानका लागि भोटिङ मेसिन अन गरिएको छैन।
निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको मतदाता नामावलीमा विवाद उत्पन्न भएपछि मतदानमा ढिलाई भएको हो। केही देशले पठाएको मतदाता सूची अनुमोदन नगर्दिँदा विवाद उत्पन्न भएको थियो।
एक प्रतिनिधिका उनका अनुसार केही बेरमा मतदान सुरु हुने जानकारी दिइएको छ। प्रक्रियागत ढिलाईका कारण मतदानमा केही समय लागेको उनको भनाइ छ।
आगामी दुई वर्षका लागि कुमार पन्त र कुल आचार्यको प्यानल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। ४ जना उपाध्यक्ष पदका लागि ९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। उपाध्यक्षमा हिक्मतबहादुर थापा, किरणबिक्रम थापा, अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्रबहादुर भाट, डा. बद्री केसी, मन केसी, धर्मराज अधिकारी, सोनाम लामा र डा.केशव पौडेल चुनावी मैदानमा छन्।
त्यस्तै महिला उपाध्यक्षमा सपिला राजभण्डारी र रविना थापा प्रतिस्पर्धामा छन्। महासचिवमा जानकी गुरुङ र हेमराज थापाको उम्मेदवारी परेको छ। दुई जना सचिव पदका लागि ७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। दीपकप्रसाद ओली, सुष्मा लिम्बु, अभिमानसिंह बस्नेत, शिवकुमार बरुवाल, गौरीराज जोशी, आरके शर्मा र विनय अधिकारी सचिवका उम्मेदवार हुन्।
कोषाध्यक्ष पदमा तीन जना प्रतिष्पर्धामा छन्। सोमनाथ सापकोटा, महेशकुमार श्रेष्ठ र सुदन थापाको कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी परेको छ। एकजना सहकोषाध्यक्षमा लोकप्रसाद दाहाल र गोविन्दप्रसाद गौतम मैदानमा छन्।
महिला संयोजकमा प्रमिला खड्का बस्नेत, भोमादेवी लिम्बु र संगीता मरहट्टा उम्मेदवार छन्। युवा संयोजकमा हिमाल गुरुङ, स्वतन्त्रप्रताप थापा र सुदीप कार्कीबीच मतदान हुने भएको छ। अफ्रिकाको क्षेत्रीय संयोजकमा रोशन थापा निर्विरोध चयन भएका छन् । अफ्रिकाक्षेत्रको महिला संयोजकमा मनकला थापा विष्ट उम्मेदवारी छिन्।
एशिया प्रशान्त क्षेत्रको क्षेत्रीय संयोजकमा गोविन्द श्रेष्ठ (रोविन्द) आविज गुरुङ (ओम) र केपी सिटौलाको उम्मेदवारी परेको छ । उपसंयोजकमा पारसमणि पोखरेल, टंकप्रसाद गैरे, खगेन्द्र न्यौपाने र विनोद कुँवरको उम्मेवदारी परेको छ। महिला संयोजकमा अमृता थापा निर्विरोध चयन भएकी छन्। युवा संयोजकमा मिलन घिमिरे र दीपकप्रसाद कँडेलको उम्मेदवारी परेको छ।
अमेरिकाजको क्षेत्रीय संयोजकमा राजन त्रिपाठी र डा. विनोदप्रसाद शाह, उपसंयोजकमा राम सी पोखरेल र अभिमन्यू बस्नेत प्रतिष्पर्धामा छन्। महिला संयोजकमा राधाकुमारी पौडेल र उमा कार्की थापाको उम्मेदवारी परेको छ। क्षेत्रीय युवा संयोजकमा विमला सापकोटा निर्विरोध निर्विरोध निर्वाचित भइन्।
मध्यपूर्व संयोजकमा प्रविन गुरुङ, उपसंयोजकमा राजेन्द्र अर्याल र मनोजकुमार श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भए। महिला संयोजकमा सुमित्रादेवी पौडेल निर्विरोध निर्वाचित भइन्। ओसेनिया क्षेत्रको संयोजकमा होमनाथ पाण्डे र दिनेशराज जोशीको उम्मेदवारी परेको छ। उपसंयोजकमा हरि राम्जाली र नवीन कँडेल चुनावी मैदानमा छन्। महिला संयोजकमा जानकी पौडेल र युवा संयोजकमा राजकुमार थपिलया निर्विरोध चयन भए।
युरोपको क्षेत्रीय संयोजकमा सन्तोषकुमार भट्टराई, पदम गुरुङ, गंगाधर गौतम र नारायणप्रसाद आचार्यको उम्मेदवारी परेको छ। २ सदस्यीय उपसंयोजकमा कृष्णप्रसाद तिमल्सिना, शुक्रराज न्यौपाने, नवराज रोस्यारा, बालकृष्ण श्रेष्ठ, कुमार पण्डित, सुरेन्द्र प्रधान र मुक्तबहादुर गुरुङको उम्मेदवारी परेको छ। युरोप क्षेत्रको महिला संयोजकमा कुमारी योगिता थापा र युवा संयोजकमा जयकृष्ण ठाकुर निर्विरोध निर्र्वाचित भए।
काठमाडौँ, २६ काठमाडाैं । नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सगरमाथा र हिमाली क्षेत्रको रक्षा गर्न चीन सदैव तयार रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रपति सीको सम्मानमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले होटल सोल्टीमा आयोजना गरेको विशेष रात्रिभोज समारोहलाई सम्बोधन गर्दै साझा गृहस्थल पृथ्वी र विशेष गरेर सगरमाथा र हिमाली क्षेत्रको रक्षा गर्न आफूहरु सदैव तयार रहने […]
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अभिव्यक्तिमाथि उनकै पूर्वसहयोद्धा डा.बाबुराम भट्टराईले प्रश्न गरेका छन्। मोरङमा शुक्रबार आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा प्रचण्डले मदन भण्डारीसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै बाबुरामले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय बाबुरामले ट्विटरमार्फत् प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका हुन्। भट्टराईले ट्वीटमा प्रचण्डलाई दोहोरो चरित्रको नेता भएको […]